Iyo nyowani yeNetflix ficha iyo Hollywood inovenga | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani yeNetflix chimiro chave chiri paYouTube kwenguva yakareba.
Chinhu chitsva icho Netflix chiri kuyedza, yakanakira avo vane nguva shoma. Chokwadi chinotaurirwa, kwete zvese paNetflix zvinondifadza. Handina kumbopinda kwenguva yakareba, Asi kana ini ndichifarira chimwe chinhu, semuenzaniso dzakateedzana dzine zvitsauko zvakawanda, zvinondinetsa kuti ndivhiringidze kutarisa kuti ndiite chimwe chinhu.
Zvisinei, hachisi chinhu chakanyanyisa. Icho chinhu icho YouTube uye mazhinji multimedia player software anga achishandisa kwenguva yakareba.
1 Ndeipi nyowani yeNetflix chimiro?
2 Hollywood haifarire
Ndeipi nyowani yeNetflix chimiro?
Nyanzvi dzechigadzirwa dzinokurudzira kwete kungoteerera chete kumabhuku ehurukuro panzendo uye nenguva dzekumirira. Ivo zvakare vanokurudzira kuzviita nekumhanyisa kumhanya kunogoneka pasina kuita kuti zviome kunzwisisa zvirimo. YouTube, sekutaura kwedu, ine basa rakafanana. Asi Google's yekushambadzira saiti ine zvedzidzo uye zvine ruzivo zvemukati. Kusvika parizvino hapana munhu anga afunga kuishandisa kungano.
Asi, ikozvino Netflix iri kuyedza chimiro pamwe nevamwe vashandisi ve iyo app yezvishandiso zveApple.
Avo vaive nekwaniso yekuyedza vakataura kuti vaive nazvo nyowani yekumhanyisa kutonga.
Vashandisi vaive nekwaniso yeiyo nyowani yekumhanyisa kutonga vakataura izvozvo inogona kugadzirisa kutamba yeNetflix mazita ekutarisa nekukurumidza kana kunonoka. Yekumhanya yekumhanyisa kumhanya ndeye imwe nehafu nguva zvakajairwa. Inononoka iri hafu yakajairwa.
Parizvino uku hakusi kugadzirisa kwepasirese, asi inofanira kuitwa zita nemusoro.
Judd Apatow, aive wekutanga muindasitiri kunyunyuta paTwitter:
«Tinokupa zvinhu zvakanaka. Vasiyei sezvavaida kuti muonekwe. "
Kubva pane chirongo cheNutella maanogara, VaApatow havagone kuzvinzwisisa izvozvo tine munhuvasina kuona izvo dzimwe nguva tinoda kuona chiitiko pane chinononoka kumhanya kuti titore zvese zvakadzama. Kana kuti kune vanhu vangori ivo havagone kushandisa hupenyu hwavo pamberi pechiso.
Asi isu isu isu tinobhadhara kunyoreswa tichaziva chii?
Kunyangwe kubva kuNetflix vanovimbisa kuti vanofunga nezve kunetseka kwevagadziri, vanoirangarira iro basa rakanga ratovepo mune dvd vatambi uye, kuwedzera kwangu, mumavhidhiyo vatambi vema80's.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo nyowani yeNetflix chimiro. Hollywood haifarire, asi vashandisi vazhinji vanozoida
Chokwadi, vanhu vazhinji havagone kushandisa hupenyu hwavo pamberi pechiso. Asi pane zvakawanda zvingasarudzwa, kusanganisira kutarisa zvishoma zvirimo, kutarisa akateedzana panzvimbo yemamuvhi, kana kutarisa zvirimo mumazuva maviri. Zvemukati pa1.5x chiratidzo chechokwadi cheizvo nzanga isingafanire kuve.
Pindura kuna Aritz
Ndinozviona zvakanyanya kudivi rekunonoka kutora dhata idzo dzeNetflix chaidzo dzimwe nguva dzine chinhu chakakosha kumagumo. Iwo akafanana nemapoinzi akakosha ayo munhu anofanira kubata kuti anzwisise zvinhu. Kunge Black Mirror, Orange, pakati pevamwe.
Uye ndinoshamisika kuti havawedzeri 2 na3x
Yakatumidzwa iwe unogona kuziva nezve chitsauko.
Ini ndinovaisa se "kumashure mumhanzi" wekuti anononoka sei marongero anoenda mune dzimwe nguva.
Kune mashoma akateedzana, pamwe maminetsi makumi maviri-comedies anochengetwa mairi kana iwe uchifarira joko rega uye chiito chese, izvo zvisiri zvese.
Uye mumabhaisikopo zvakatonyanya kushata.
Yakave nguva yakareba kubvira pavakaita maminetsi makumi mapfumbamwe emitambo iyo isingaonekwe pa90 kana 2x nekumbomira kwemazana mana avanogadzira.
Izvo zvinonzwisiswa kuti ivo vanoita zvinhu zvekuti kunyangwe iye munhu waanoripira zvakanyanya anogona kuzvifarira, uye nekuda kwechikonzero ichocho, avo vedu vari nyore vanogona kuzvidya nekukurumidza.